Suuqyada Digaagga Ee Muqdisho Oo Sii Dabar Go’aya – Goobjoog News
Suuqyada Digaagga Ee Muqdisho Oo Sii Dabar Go’aya
Iibsiga, cunista Digaagga dalka lagu dhaqdo ayaa sii yaraanaya, iyada oo taas badalkeeda dadku ay door bidayaan cunista Digaagga laga keeno dalka Brazil kaasi oo si qasab ah lagu bacrimiyo .
Waxaa lagu arkaa magaalooyinka waaweyn ee dalkeenna hilib digaag oo dalka dibaddiisa laga keeno, waxaa ayna keentay arrintaas in ay aad u yaraadaan cunista iyo ka ganacsiga Digaagga dalka oo aad uga qiimo jaban kan dalka dibaddiisa laga keeno.
Waxaa ay arrintan saameyn ku yeelatay dadka gudaha dalka ku xanaaneeya Digaagga, kuwaas oo sheegay in inta badan dadka ay door bidaan d#Digaagga laga keeno dibadda balse waxaa jira dad yar oo iyagana iibsada Digaagga lagu xanaaneeyo dalka.
Cumar Kaafi Nuur Maamulka Cadaani Khicken waxaa uu Goobjoog News uga warramay caqabadaha heysta Digaagga lagu xanaaneeyo gudaha dalka waxaa uuna yiri “Gadaha digaagga lagu sameeyo inta badan waxyaabaha aan u iibin la’nahay waxaa ka mid ah xanaano la’aan diyaarin la’aan, marka digaagga aan iibinno oo dibadda laga keeno waa mid diyaarsan horayna loo soo xanaaneeyay”.
Suuqyada lagu iibiyo digaagga dalka lagu dhaqo ayaa sii yaraanaya taasi waxaa ay keentay in dad badan oo ka ganacsan jiray shaqo la’aan ay noqdaan halka kuwa kalena ay sheegayaan in aysan jirin cid wax ka iibsata.
Goobo badan oo dalka gadahiisa ah ayaa lagu xanaaneeyaa digaagga laga keeno dibadda shirkado gaar ah ayaa bilaabay ka ganacsigiisa waxaa ayna sheegayaan ganacsataan in digaaggii gudaha dalka uu yaraaday sidaasna ay u doorbideen in dibadda ay ka keensadaan.
Cabdullahi Xasan Axmed maamulaha Somali Poultry Farm waxaa uu yiri “ Waxaa aan leeyahay gudaha dalka waa lagu xanaaneyn karaa digaagga waana la dhaqi karaa “.
Saameyn dhanka nolasha ah ayey ku yeelatay dad badan oo ka ganacsan jiray digaagga dalka lagu dhaqdo waxaa ayna sheegayaan in markii hore ay heysteen suuq fiican balse hadda aysan jirin cid wax ka iibsata .
Suuqyada lagu iibiyo Digaagga ee magaalada Muqdisho ayey fadhiyaan iyaga oo rajadoodu ay tahay mid liidata waxaana dhacda mararka qaar in saacadaha badan oo ay joogaan Suuqa ay arki waayaan cid xataa weydiisa qiimaha la iibiyo Digaagga.
Cali Ibraahim waxaa uu ka ganacsadaa Digaagga waxaa uu Goobjoog News u sheegay caqabadaha ay ku heyso Digaagga laga keeno dalka dibaddiisa waxaa uuna yiri.
“ Caqabad badan ayey nagu heysaa waxaa ayna nagu reebtay saameyn weyn dhaqaallaheenii oo dhan hoos ayuu u dhacay.
Geneva: Shir Ku Saabsan Yeman Oo Maanta Ka Dhacaya